Mpanamboatra bisikileta, bisikileta elektrika, motera mid drive - Eecycle
MOTOR MIDIDA MID
Manana haitao 12 misy patanty eto an-toerana sy iraisam-pirenena momba ny bisikileta sy bisikileta elektrika (ao anatin'izany ny patanty fisehoana, patanty modely ary patantin'ny famoronana sns
Izahay dia orinasa manana traikefa famokarana sy fanondranana mihoatra ny folo taona
Manana atrikasa momba ny endriny manokana izahay, atrikasa fanaovana hosodoko ary atrikasa famoriana
Famolavolana matihanina sy ekipa R&D, afaka mamolavola andalana sy vokatra ho an'ny mpanjifa
Akaikin'ny seranan'i Tianjin, miaraka amin'ny fahombiazany avo lenta, dia afaka manampy ny mpanjifa mamonjy entana
Serivisy avo lenta sy ara-potoana
Bisikileta mora vidy mora indrindra, ...
Namboarina namboarina ho bisikileta azo zahana, aforeto ...
bisikileta anatiny bateria elektrika 27 ...
CE 48V 250W 350W 26 Inch bateria ao amin'ny frame Fr ...
mivantana factory Aluminium firaka bisikileta elektrika fra ...
Efa mahazatra kluter, ny bisikileta aforeto dia mbola vaovao ihany eo amin'ny sehatry ny bisikileta. Saingy tsy natao ho an'ny mpandeha fotsiny izy ireo izay te ho afaka mivezivezy amin'ny bisy na lamasinina miaraka amin'ny bisikiletany, ary koa mitahiry izany ao ambanin'ny latabany eo am-piasana. Izy ireo koa dia mety ho safidy mahafinaritra ho an'ny olona voafetra ...
Ahoana ny fisafidianana bisikileta
Mitady mitaingina vaovao? Indraindray ny jargon dia mety hampatahotra kely. Ny vaovao tsara dia tsy mila mahay miteny bisikileta ianao vao manapa-kevitra hoe bisikileta iza no mety indrindra amin'ny fiainanao kodiarana roa. Ny dingan'ny fividianana bisikileta dia azo ampangotrahana hatramin'ny dingana fototra dimy: -Fidio ny bas bas type mety ...
Ny indostrian'ny bisikileta dia mahatratra ny fahombiazan'ny vokatra sy ny varotra
Mikaroka vaovao farany momba ny indostrian'ny bisikileta, misy lohahevitra roa tsy azo sorohina: ny iray dia ny varotra mafana. Araka ny angon-drakitra avy amin'ny Fikambanan'ny Bisikileta China, hatramin'ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity, ny indostria dia nanampy sanda ho an'ny bisikileta taniko (anisan'izany ny bisikileta elektrika ...